IPirates izabalaze yaphuma nawo ephelele amaphuzu kwiMaritzburg - Impempe
IPirates izabalaze yaphuma nawo ephelele amaphuzu kwiMaritzburg
Akuwona umdlalo obusezingeni elijabulisayo, kodwa i-Orlando Pirates izojabula ngamaphuzu amathathu ewawole ngemuva kokuhlula iMaritzburg United ngo 1-0 emdlalweni weDStv Premiership eHarry Gwala Stadium ngoMgqibelo ntambama.
Umdlalo awuqalanga ngegiya eliphezulu njengoba bezithengana ngasekuqaleni ingekho efuna ukuzidela ikhiphe wonke amangwevu. Nokho ngokuqhubeka komdlalo eZimnyama zibe seziqala ukuhlanganisa iminyakazo ehlaselayo.
Kodwa bezihluleka ukugqobhoza udonga lwasemuva lweBlue Hearts kwaze kwaba ngumzuzu ka-40 la uDeon Hotto ekwazile khona ukubeka iBucs phambili. Kuyiwe ekhefini iPirates seyihlasela impela futhi bekumele ilithole okungenani elesibili.
Nasesiwombeni sesibili iBucs iyona ebikhombisa inhloso yokuwina, ilokhu ihlasela izama ukuthola elesibili. Nokho beyingatatazeli, yesabela ukuthi uma iya yonke phambili iMaritzburg izothola isikhala sokuyihlasela ngokuzumisa.
NeMaritzburg ijike indlela ebidlala ngayo ngesiwombe sesibili, ikhipha oJudas Moseamedi, Ali Meza noRiyaaz Ismael izindawo zabo zathathwa ngoThabiso Kutumela, Bongokuhle Hlongwane noDylon Classen. Yize laba badlali bekhombise umfutho, akukho okutheni abakwenzile ukusiza iqembu.
IMaritzburg ike yaba nazo iziqubu la beyikhombisa ukuthi iyalifuna igoli lokulinganisa kodwa yafica ukuthi iPirates ayizimisele ukuphinde iphucwe iqatha selisemlonyeni.
IMaritzburg izithole sekumele iphinde imkhiphe uHlongwane ngemuva kokuthi elimalile, kwangena uSibusiso Hlubi endaweni yakhe. Womabili amaqembu awatholile amathuba okushaya amagoli ngasekupheleni komdlalo kodwa ahluleka ukuwasebenzisa.
Komunye umdlalo obungoMgqibelo ntambama, AmaZulu FC abuye ejabule ePolokwane la eshaye khona iBaroka ngo 2-1 wamagoli oBongi Ntuli noSiphelele Magubane ukuze abuye namaphuzu agcwele. Kubukeka sengathi ukusabisa komqeqeshi, uBenni McCarthy ngokuthi khona abadlali azobaxosha uma izinto zingajiki kusebenzile.
IChippa United nayo ibuye namaphuzu agcwele eThohoyandou Stadium la ishaye khona iBlack Leopards ngo 3-0. Amagoli eChilli Boys ashaywe ngo-Andile Mbenyane, Augustine Kwem noKurt Lentjies.
UKeagan Buchanan weMaritzburg United ebanga ibhola no-Azola Tshobeni we-Orlando Pirates
Previous Previous post: IChiefs ilahle amathuba idlala ngokulingana neStellenbosch
Next Next post: Bamshayele iBaroka wajika ukukhuluma uMcCarthy ngabadlali boSuthu